ဒေးဗစ်လား တရားစွဲခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းပေမယ့် ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ Lဆိုင်းဇီ ပြောဆို – Zartiman
ဒေးဗစ်လား တရားစွဲခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းပေမယ့် ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ Lဆိုင်းဇီ ပြောဆို
Zarti Man | May 23, 2020 | Celebrity | No Comments
အင်းစိန်မြို့နယ် ၌ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့က COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ဦးစောကွယ်ဝါး (သင်းအုပ်ဆရာ)နှင့် အမှုတော်ဆောင် ဦးစောရေဂန်ဒီ တို့ကို လည်း ရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် လူစုလူဝေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအပေါ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၇၀၆/၂၀၂၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထား သည်။
တရားဟော ဆရာ ဦးစောဒေးဗစ်လား ကို ယနေ့မေ ၂၀ ရက် တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံး ၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ရမန်နှစ်ပတ်ယူ ကာ အင်း စိန်ထော င်သို့ ပို့လိုက်ပြီ ဖြစ် သည် ။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလ အတွင်း လူစုလူဝေး မလုပ် ရန် တားမြစ်ချက် အား ဖောက်ဖျက်၍ ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနား တစ်ခုတွင် တရားဟောပြောခဲ့ သောကြောင့် တရားဟောဆရာ ဦးစောဒေးဗစ်လား ကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ က သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ ဖြင့် အမှုဖွင့် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ ရုံး ထုတ်မည်ဖြစ် သည် ။
တရာဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားကို ကိုဗစ်-၁၉စည်းကမ်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ပြီး လူစုလူဝေးပြုလုပ်မှုနဲ့ မေလ ၂၀ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံးအ ကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အဆိုပါတရားမှ ကပ်ရောဂါဆိုးကို ကိုယ်တိုင်ကူးစပ်ခံခဲ့ရရုံမကဘဲ ပွဲကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆို တော်တွေအပါအဝင် လူ ၈၀ဦးခန့် ကူးစက်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လား ကိုသဘာဝဘေး အန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ အရ တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ မှာတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ကာ ရမန်၂ပတ်ယူပြီး အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသံအားကောင်း ကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် Lဆိုင်းဇီ က အမြဲပျော်ပျော်နေတက်သူဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာ မျက်နှာမှာ လဲ သူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှလေ့ရှိပါတယ်။သို့ပေမယ် ယနေ့မှာ တော့ သူ့ရဲ့ ဆရာ အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို ရိုးရှင်းစွာ ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ” တော် ရုံ တန်ရုံ ကျွန်မ စာရေးပြီး FB ပေါ် စာ ရေးမတင် တတ်ပါဘူး…တော်ရုံကိစ္စဆို ခေါင်းထဲ မှာ မထဲ့တတ်လို့ပါ…ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ ရေး ပါမယ်… ဒီနေ့ မနက် ၉:၁၅ ကတော့ ကျွန်မရဲ့ ဘဝမှာ…ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပီး…သေမလောက်ခံစားရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားသ ခင်က အရာအားလုံးကိုသိမြင်ပီး ဘုရားဘုန်းအဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲ…မျက်ရည်များနဲ့အတူဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
“ဒီနေ့ခေတ်မှာ ယုံကြည်သူ အင်္ဂါချင်းဆိုတာ..ဘယ်ဆီများရောက်သွားသလဲလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ ထပ်တူဝမ်းနဲရမယ့်အချိနိမျိုးမှာ… ကြိတ်ပျော်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ရတော့….ရင်ထဲစို့နစ့်ရလောက်အောင်ပဲ..အလွန်ဝမ်းနဲမိပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်က မီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေတော့…ခရစ်ယာန်မီဒီယာတွေကနေ စလိုက်တဲ့ အရာလေးတခုကနေ…ခုလောက်ထိဖြစ်သွားခဲ့တာပဲလေနော်…။ ဘယ်မှာလဲ အင်္ဂါချင်း…? ဘယ်မှာ လဲ ဘုရားမေတ္တာ….?တချို့ကခရစ်ယာန်ဖြစ်ရတာတောင်ရှက်မိတယ်လို့ပြောတဲ့အဖွဲ့တွေကရှိသေးတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ ၁ပေ ၄:၁၆မှာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ရှုတ်ချခြင်း ငြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံ ရရင် မ ရှက်ကြပါနဲ့။ ထိုအမှုကြောင့်သင်ခံရလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါလို့ သွန်သင်ထားပါတယ်။ခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာ သာ သနာပသူတွေက ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကြတာကို အပြည့်ဝလက်ခံပါတယ်။ သို့သော် ယုံကြည်သူချင်းဦးခေါင်းခရစ်တော်အထဲက ကိုယ်အင်္ဂါ ချင်း က…ပျော်နေတာတွေ…ကဲ့ရဲ့နေတာတွေကိုတွေ့ရတော့…အတိုင်းမသိဝမ်းနဲမိပါတယ်။
ဆရာရေ ဆရာ့အတွက်သမီးကတော့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်.။ ဘုရားအမှုတော်မှာ ခုလောက်ထိ သစ္စာရှိစွာအစေခံနေတာတွေ့ရလို့…ခုကျတဲ့ မျက်ရည်က ဆရာ့ကို ခုလိုမြင်ရလို့ ဝမ်းနဲတဲ့မျက်ရည်နဲ့အတူ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိတဲ့မျက်ရည်ပါ…ခပ်သိမ်းသောအရာသည် ကိုယ်တော့် အထဲက ကိုယ်တော့်အားဖြင့် ကိုယ်တော့်အဘို့အလို့ငှာသာဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ အဆက်ဆက်…ဘုန်းကြီး၍ မင်္ဂလာရှိပါစေ အာမင် လို့ ဆိုကာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲ သူစိတ်မကောင်း ကြောင်း ကိုဘဲရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒေးဗဈလား တရားစှဲခံရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ဝမျးနညျးပမေယျ့ ဂုဏျယူပါတယျလို့ Lဆိုငျးဇီ ပွောဆို
အငျးစိနျမွို့နယျ ၌ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့တို့က COVID-19 ရောဂါထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ ညှနျကွားခကျြမြားအား လိုကျနာရနျပကျြကှကျခဲ့သညျ့ ဦးစောကှယျဝါး (သငျးအုပျဆရာ)နှငျ့ အမှုတျောဆောငျ ဦးစောရဂေနျဒီ တို့ကို လညျး ရောဂါဖွဈပှားစနေိုငျသညျ့ လူစုလူဝေးပွုလုပျဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးအပျေါ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာစီမံခနျ့ခှဲမှုဥပဒအေရ အငျးစိနျမွို့မရဲစခနျးက (ပ)၇၀၆/၂၀၂၀ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထား သညျ။
တရားဟော ဆရာ ဦးစောဒေးဗဈလား ကို ယနမေ့ေ ၂၀ ရကျ တှငျ မရမျးကုနျးမွို့နယျ တရားရုံး ၌ ရုံးထုတျခဲ့ပွီး ရမနျနှဈပတျယူ ကာ အငျး စိနျထော ငျသို့ ပို့လိုကျပွီ ဖွဈ သညျ ။ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာလ အတှငျး လူစုလူဝေး မလုပျ ရနျ တားမွဈခကျြ အား ဖောကျဖကျြ၍ ဘာသာ ရေးဆိုငျရာ အခမျးအနား တဈခုတှငျ တရားဟောပွောခဲ့ သောကွောငျ့ တရားဟောဆရာ ဦးစောဒေးဗဈလား ကို ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး အစိုးရ က သဘာဝဘေး အန်တရာယျ ဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲ မှု ဥပဒပေုဒျမ ၂၅ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ ထားခွငျးဖွဈပွီး လာမညျ့ ဇှနျလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ထပျမံ ရုံး ထုတျမညျဖွဈ သညျ ။
တရာဟောဆရာ ဒေးဗဈလားကို ကိုဗဈ-၁၉စညျးကမျးခကျြကို ဖောကျဖကျြပွီး လူစုလူဝေးပွုလုပျမှုနဲ့ မလေ ၂၀ရကျနမှေ့ာ ပထမဆုံးအ ကွိမျ ရုံးထုတျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အဆိုပါတရားမှ ကပျရောဂါဆိုးကို ကိုယျတိုငျကူးစပျခံခဲ့ရရုံမကဘဲ ပှဲကိုလာရောကျခဲ့တဲ့ နိုငျငံကြျောအဆို တျောတှအေပါအဝငျ လူ ၈၀ဦးခနျ့ ကူးစကျခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တရားဟောဆရာ ဒေးဗဈလား ကိုသဘာဝဘေး အန်တရာယျ ဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒပေုဒျမ ၂၅ အရ တရားစှဲဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယနေ့ မှာတော့ ပထမဆုံးအကွိမျရုံးထုတျကာ ရမနျ၂ပတျယူပွီး အငျးစိနျထောငျကိုပို့ဆောငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ အသံအားကောငျး ကောငျးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို စှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ အဆိုတျော Lဆိုငျးဇီ က အမွဲပြျောပြျောနတေကျသူဖွဈသလို သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာ မကျြနှာမှာ လဲ သူရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေို ဝမြှေလရှေိ့ပါတယျ။သို့ပမေယျ ယနမှေ့ာ တော့ သူ့ရဲ့ ဆရာ အတှကျ စိတျမကောငျး ဖွဈရတဲ့ အကွောငျးကို ရိုးရှငျးစှာ ရေးသား ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ ” တျော ရုံ တနျရုံ ကြှနျမ စာရေးပွီး FB ပျေါ စာ ရေးမတငျ တတျပါဘူး…တျောရုံကိစ်စဆို ခေါငျးထဲ မှာ မထဲ့တတျလို့ပါ…ဒီနတေ့ော့ ကြှနျမ ရေး ပါမယျ… ဒီနေ့ မနကျ ၉:၁၅ ကတော့ ကြှနျမရဲ့ ဘဝမှာ…ဝိညာဉျနဲ့ပတျသကျပီး…သမေလောကျခံစားရတဲ့ အခြိနျဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဘုရားသ ခငျက အရာအားလုံးကိုသိမွငျပီး ဘုရားဘုနျးအဖို့ဖွဈတယျလို့ပဲ…မကျြရညျမြားနဲ့အတူဝနျခံခဲ့ရပါတယျ။
“ဒီနခေ့တျေမှာ ယုံကွညျသူ အင်ျဂါခငျြးဆိုတာ..ဘယျဆီမြားရောကျသှားသလဲလို့တောငျတှေးမိပါတယျ။ ထပျတူဝမျးနဲရမယျ့အခြိနိမြိုးမှာ… ကွိတျပြျောနတေဲ့သူတှေ တှရေ့တော့….ရငျထဲစို့နဈ့ရလောကျအောငျပဲ..အလှနျဝမျးနဲမိပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေက မီဒီယာခတျေဖွဈနတေော့…ခရဈယာနျမီဒီယာတှကေနေ စလိုကျတဲ့ အရာလေးတခုကနေ…ခုလောကျထိဖွဈသှားခဲ့တာပဲလနေျော…။ ဘယျမှာလဲ အင်ျဂါခငျြး…? ဘယျမှာ လဲ ဘုရားမတ်ေတာ….?တခြို့ကခရဈယာနျဖွဈရတာတောငျရှကျမိတယျလို့ပွောတဲ့အဖှဲ့တှကေရှိသေးတယျ။
စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။ သမ်မာကမျြးစာထဲမှာတော့ ၁ပေ ၄:၁၆မှာ ခရဈယာနျဖွဈလို့ ကဲ့ရဲ့ခွငျး ရှုတျခခြွငျး ငွငျးပနျးနှိပျစကျခွငျးခံ ရရငျ မ ရှကျကွပါနဲ့။ ထိုအမှုကွောငျ့သငျခံရလြှငျ ဘုရားသခငျ၏ ဂုဏျကြေးဇူးကိုခြီးမှမျးပါလို့ သှနျသငျထားပါတယျ။ခုဖွဈနတေဲ့ကိစ်စတှမှော သာ သနာပသူတှကေ ကဲ့ရဲ့ရှုတျခကြွတာကို အပွညျ့ဝလကျခံပါတယျ။ သို့သျော ယုံကွညျသူခငျြးဦးခေါငျးခရဈတျောအထဲက ကိုယျအင်ျဂါ ခငျြး က…ပြျောနတောတှေ…ကဲ့ရဲ့နတောတှကေိုတှရေ့တော့…အတိုငျးမသိဝမျးနဲမိပါတယျ။
ဆရာရေ ဆရာ့အတှကျသမီးကတော့ဂုဏျယူမိပါတယျ.။ ဘုရားအမှုတျောမှာ ခုလောကျထိ သစ်စာရှိစှာအစခေံနတောတှရေ့လို့…ခုကတြဲ့ မကျြရညျက ဆရာ့ကို ခုလိုမွငျရလို့ ဝမျးနဲတဲ့မကျြရညျနဲ့အတူ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျမိတဲ့မကျြရညျပါ…ခပျသိမျးသောအရာသညျ ကိုယျတေျာ့ အထဲက ကိုယျတေျာ့အားဖွငျ့ ကိုယျတေျာ့အဘို့အလို့ငှာသာဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာ အဆကျဆကျ…ဘုနျးကွီး၍ မင်ျဂလာရှိပါစေ အာမငျ လို့ ဆိုကာ မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ မထိခိုကျဘဲ သူစိတျမကောငျး ကွောငျး ကိုဘဲရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ကပ်ရောဂါကို အကြောင်းပြုပြီး အပြင် ထွက်ပြီးအလှူလုပ်ေ န သူတွေ က ဖားချင်၊ heroလုပ်ချင်စိတ် များနေတာလို့ ပြောဆိုလိုက် တဲ့ လှနုထွန်း
အလုပ်လုပ်ရင်း အားပြတ်သွား တာကြောင့် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ ပရဟိတမင်းသားဝေဠုကျော်
ကင်ဆာရောဂါနောက်ဆုံး အဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ် တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲ၏ လက်ရှိ ဘ၀အခြေအနေ
Stay Homeကာလ အိမ်ထဲ မှာနေရင်း တစ်နေ့ တစ်ခြား အလှတွေ ပိုတိုးလာကြောင်း သက်သေပြ လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်